निर्मल शर्मालाई कसले गर्यो कारबाहीको माग ? « Ramailo छ
निर्मल शर्मालाई कसले गर्यो कारबाहीको माग ?
समय : 5:59 pm
कलाकार, निर्माता तथा निर्देशक निर्मल शर्मा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् । गैंडा नामले दर्शक माझ परिचित शर्मा दिनमा कम्तीमा एउटा स्टाटस पोस्ट गर्छन् । उनका स्टाटस घतलाग्दा हुन्छन् । उनी सामाजिक उत्तर दायित्वदेखि राजनीतिक विषयमा स्टाटस लेख्छन् । बुधबार भने शर्माले आफ्नै संघ कलाकार संघलाई स्टाटस लेखेका छन् । कलाकारको हक हितका लागि संघ जागृत नभएको भन्दै उनले संघ आफैंलाई कारबाही गर्न लागि परेको खुलाएका छन् । उनको स्टाटस यस्तो छ :
आदरणीय कलाकार संघ,
१) कलाकार दिपक क्षेत्री ज्यू लाई केहि गरौं भनेर फेसबुकमा लेखे, दावित्व संघको थियो, कानमा तेल हालेर बस्नुभयो, बाध्य भएर चलचित्र पत्रकार संध को सहकार्यमा संसार भर बाट सहयोग आयो, हाल उहाँ ठिक हुनुहुन्छ,
२) भर्खरै छक्का पन्जा र नायिका ऋचा शर्मा बिचको सामाजिक संजाल को लफडामा तपाई संघको नाताले के गर्नु भयो ?
३) भर्खरै फिल्म गित रिलिज कार्यक्रममा लगभग दुई नग्न महिला बिकनी मै लिएर नायक हलमा उपस्थित भए, के हामी त्यति धेरै आधुनिक भैसकेको छौ र ? तपाईहरुले के गर्नु भयो ?
५) बजार भरी छाडा र अश्लील युट्युव च्यानल हरुको बिगबीगीले लाग्छ हामी रेड लाईट क्षेत्रमा काम गर्नै बर्ग हौ भन्ने महसुस हुन्छ, यस बिषयमा तपाईहरुले के गर्नु भयो ?
कलाकार संघ भनेको बिशुद्ध कलाकार को हितमा हुनुपर्ने हैन, लफडा गर्ने कलाकारलाई चेतावनी दिने, नसीहत दिने, आचार संहिता बनाएर पालना गराउनु पर्ने हैन ? सुन्दर समाज निर्माण गर्नु पर्ने हैन ? तपाई हरु त उल्टै मलाई पो कारबाही गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ रे ? के यो देशमा कानुन, समाज अनी सवै अवलोकन गरिरहेका जनता छैनन र ? मलाई आजीवन कुनै पद र राजनैतीक नियुक्ती चाहिदैन तर तपाईहरु आफ्नो दावित्व पुरा गर्नुस्, मलाई सम्मान पनि परेन, कहिको निम्ता पनी परेन !